जीवनको वृक्ष - विश्व संस्कृति को भाग
अमरता को विषय लामो मानिसजातिको रुचि छ। राजा, emperors र साधारण मान्छे - अनन्त जीवनको Elixir लागि खोज हुन पनि कसरी शक्तिहरु बारेमा भावुक थिए। प्रतीक, संसार र सांस्कृतिक सभ्यताहरू अधिकांश धार्मिक शिक्षाले अमरता personifying, जीवन को रूख हो। यो बल र दीर्घायु embodies।
संसारको धर्म र संस्कृतिका जीवन को रूख को मूल्य
यो अवधारणा धेरै मानिसहरूले र सबै भन्दा साधारण विश्वास को धार्मिक स्मारक को संस्कृति पाउन सकिन्छ।
Kabbalah संसारमा दस emanations वा manifestations gd मन को एक संरचना प्रतिनिधित्व छ। यो संरचना यो Sephiroth वा Sefirot भनिन्छ रूपमा, जीवन को रूख हो। Sefirot हिब्रू नाम र जादुई क्षमता छ संग - यो तत्व प्रतिनिधित्व गर्दछ। तिनीहरूले एक लाइन जसको अर्थ "जीवनसाथी", जडित छन् "जोडी।" Sefirot पनि सौर्य प्रणाली को ग्रह को नाम व्यक्त। उच्चतम बिन्दु - Keter - परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। ईश्वरीय प्रकाश therethrough पासहरू, पारित यसको ऊर्जा प्रत्येक तत्व कम छ। ईश्वरीय विकिरण तल बारम्बार, Malkut, सबै भन्दा कम बिन्दु पुग्छ। कम Sefirot तत्व - पृथ्वी।
जीवन, Kabbalah, को रूख मन को उच्चतम राज्य प्राप्त गरेको छ जो एक व्यक्ति एक अभिव्यक्ति हो। रूख संरचना तीन मुख्य घटक पहिचान गर्न सक्छन्, स्तम्भहरु भनिन्छ। बायाँ तर्फ - खुलारूपमा, केन्द्रीय आधार - खाँबो संतुलन र दाहिने तिर एक दान प्रतिनिधित्व गर्दछ। सबै Sefirot आध्यात्मिक विकास विभिन्न स्तर मा मानव अवस्था व्यक्त। मानव प्राणी सबै चरणमा वा तत्व रूख मार्फत बित्दै र रूपमा sefira बीन अदनको पुग्छ। एक उच्च बिन्दु मात्र संसारको पूरा शुद्धीकरण वा "सुधार" उपलब्ध छ।
बाइबिल कथाहरू पनि जीवनको रूख उल्लेख गरे। यसरी तिनीहरू बुद्धिको यो सुन्दर प्रतीक तिनीहरूलाई depriving परमेश्वरले पहिलो मान्छे को बगैचा बहिष्कार भन्छन्। पुरानो नियमका पदहरू र अन्य स्मारक को Apocalypse मा उल्लेख रूख बारेमा। ख्रीष्टियन मा, प्रतीक फल संग हंग चित्रण गरिएको र सुरक्षित सर्पले, ड्रागन वा सिंह।
अन्य संस्कृति मा
पनि रूखको मिश्री तस्बिर,, दिने अमरता यस्तो Gilgamesh को अविस्मरणीय हित्ती पाठ धेरै पुरातन दन्त्यकथा, अनुसार। विभिन्न मानिसहरूले यसलाई पार्थिव रूखहरू विभिन्न प्रकारका प्रतिनिधित्व। त्यसैले, जीवन को जर्मन रूख - एक yew, shamanism अभ्यास गर्ने मानिसहरूका - सन्टी।
जीवनको रूख देखि स्मरणीय नमूनाहरू
त्यहाँ धेरै स्मारक हो संसारको संस्कृति को, अमरता को प्रतीक चित्रण गर्ने। उदाहरणका लागि, Iisus Hristos घेरिएको चित्रण गरिएको जो "जीवन को रूख", को प्रतिमा दाखको बोट अङ्गुर। त्यसैले, यो प्रतिमा पनि "ख्रीष्ट दाखको बोट छ" वा जानिन्छ "ख्रीष्टको साँचो दाखको बोट छ।" प्रेरितहरूले यो वरिपरि र केही नमूनाहरू पनि Precursor र सेन्ट जन भर्जिन मा प्रबन्ध मिलाए। यो तस्बिर सुसमाचारको को कथा मा आधारित छ।
यो अङ्गुर संग बोटहरू बढ्छ त्यहाँ पवित्र चिहान चित्रण गरिएको जो पवित्र पाठ अर्को व्याख्या छ। ख्रीष्टको Bunches पोत मा (बुद्धि र बलिदान व्यक्त जो) रक्सी squeezes।
जर्मन fortresses, द्वार को पर्खालहरु मा हङ थिए जो जीवन को रूख, तिनीहरूलाई तस्बिरहरू संग सुन्दर Tapestries संरक्षित छन्। तिनीहरूले पनि अभियानमा झण्डा रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
छैन मरुभूमिमा बाहरेन सही फारसी शहर देखि टाढा, 400 वर्ष को लागि बढ्दै गएको छ Mesquite। यो पानी को कमी भए तापनि, सूर्य को बलिरहेको बालुवा मा बढ्छ किनभने स्थानीय, यो जीवन को रूख कल। यो घटना संसारभरिका थुप्रै पर्यटकहरु आकर्षित गर्छ।
यो अमरता यस प्रतीक हाम्रो जीवनमा प्रयोग अक्सर छ रोचक छ। उदाहरणका लागि, धन र प्रशस्त आकर्षित गर्न एक साधारण दर्शन। यो सिस्टम घरमा पैसा रूख (Crassula) बढ्न अभ्यास। पनि विभिन्न गहने, उदाहरणका लागि यो तत्व अनुकरण, गरे मोती को पेंडेंट। त्यहाँ मनन प्रविधी "जीवन को मुद्रा ट्री" भनिन्छ, राम्रो-जा लागि अनुकूल माहौल।
यो प्रतीक समय अतिप्राचीन देखि अस्तित्व र अर्थ आधुनिक संसारमा आफ्नो नयाँ फेला जारी छ। पनि वैज्ञानिक संसारमा यो अवधारणा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। रूख पछि, अनन्त जीवन दिने, मानव परिवार र आफ्नो विकास को संरचना प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो तत्व थप अध्ययन ब्रह्माण्डको मानिसहरूलाई नयाँ रहस्य खोल्न छ।
व्यक्तिगत संकेतक को जीवन को गुणस्तर रूपमा शिक्षा गुणस्तर को सूचक
अर्थ संग अपडेट: जीवन, मान्छे, र प्रेम बारे चतुर वचनहरू
अनौपचारिक रूसी वर्ण। किन सन्टी रूस को अनौपचारिक प्रतीक भयो?
म्यासेडोनिया झण्डा: इतिहास र विवरण। ऐतिहासिक मूल गर्न फिर्ती प्रतीकको रूपमा म्यासिडोनिया को गणतन्त्र को काखमा को कोट
प्रभावकारी anthelmintic लागूपदार्थ
Sanatorium "फैरोज़ा" (लाजररेव्स्सो, सोची): आराम, आधिकारिक साइट, मूल्यहरु, फोटोहरु र पर्यटकहरूको समीक्षा
त्यो रोचक छ। कति जीवन उड?
एक rougher आवाज कसरी बनाउने?
क्रेडिट पैसा हस्तान्तरण को रसिद कसरी लेख्न